Kungani ama-infographics eyisisekelo sanoma yiliphi isu le-SEO | Martech Zone
Kungani ama-infographics eyisisekelo sanoma iliphi isu le-SEO
NgoMsombuluko, Okthoba 10, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngenkathi siguqule amasu wokuqukethwe amaklayenti ethu ukuthi ahlanganyele kangcono izithameli zawo futhi ajwayele ukuthuthuka okuqhubekayo kwemiphumela yosesho lwe-Google, isu elilodwa esingalishiyile ukwakha i-infographics yamakhasimende ethu. Empeleni, siya ngokujula… siyakhula ama-micrographics futhi kugqwayiziwe ezenhlalo yabo. Iqiniso ngukuthi akukho okuqukethwe okuningi okungcono kakhulu - okwabelwanayo, okulula, ukwaziswa nokuhle. Akumangalisi ukuthi ama-CMOs angama-78% abona sengathi okuqukethwe ngokwezifiso kuyikusasa lokumaketha kokuqukethwe kanye ne-infographics enkabeni yalokhu.
Ama-infographics ayathandwa futhi abiwa izikhathi eziphindwe kathathu kunezinye izinhlobo zokuqukethwe
I-SerpLogic ihlanganise le infographic, Kungani ama-infographics kufanele abe yingxenye yecebo lakho le-SEO, futhi ufake indlela yezinyathelo ezi-6 yokwakha i-infographic ephumelelayo:
Khomba isihloko ukuthi izithameli zakho ozozithakasela zizoba nentshisekelo kuzo. Ngingancoma kakhulu ukuthi akuyona nje into enentshisekelo kuyo, kodwa isihloko esenza inkampani yakho ibhekwe njengegunya esikhaleni esake sashicilelwa.
Khetha uhlobo lwe-infographic, kufaka phakathi i-static, motion, noma i-infographics esebenzayo noma inhlanganisela lapho ye-. Sithanda ukushicilela ama-micrographics kanye ne-socialgraphics okubuyisela ukunakwa emuva ku-infographic ephelele.
Khipha okuqukethwe namaphoyinti wedatha we-infographic. Ucwaningo oluyisisekelo nolwesibili luzokusiza ukuthi wakhe ukuthembela kuzithameli zakho. Qinisekisa ukuthi idatha ingeyamanje futhi inedumela elihle.
Dala umklamo osebenzayo futhi ohehayo. Lokhu ngokwethembeka lapho sibona khona iningi labadwebi be-infographic belahlekelwa uphawu. Idizayini enhle ingadonsa iso, kepha yikhono lomklami ukukhombisa ngamehlo indaba enqoba izilaleli zakho.
Sungula Isu Lokukhuthaza. Thumela kubhulogi yakho, yabelana kuzo zonke izindawo zokuxhumana, qala imikhankaso yokufinyelela, ubhalele amabhulogi ahlobene niche, futhi usebenzise ukukhangisa okukhokhelwayo kwezenhlalo nokusesha ukuze wandise ukufinyelela kwakho kuzethameli ezihlosiwe.
Khomba ozakwethu abengeziwe bephromoshini. Sebenzisa ithimba lakho le-PR ukuthuthukisa isu elizuzile elinaka ithani ngaphezulu ekutshalweni kwakho okwenzile.
Ngenkathi ngiyithanda i-infographic, ngicabanga ukuthi balahle umkhondo wento ebaluleke kakhulu… ukubizelwa esenzweni! I-infographic yakho izoshayela igunya futhi yabiwe phakathi kwezithameli ezifanele. Ngenxa yalokho, kufanele ube ne-CTA ephoqelela isisekelo se-infographic yakho esanda esihlokweni futhi eqala ukuzibandakanya nawe noma nenkampani yakho. Ungabi namahloni - vumela abantu bazi ukuthi ungabenzelani.
Tags: shayela esenzwenictaisu lokuthonyaingcaca yolwaziisu lokuphakanyiswa kwe-infographicisihloko se-infographicinfographics ye seoumdwebo wolwaziI-Marketing Infographicsseothandokuhleizinhlobo ze-infographics